Abwaan Cabdirashid oo maray jidkii Faarax Cabduqaadir iyo Gaas oo wada abaabul horleh – Radio Daljir
Janaayo 4, 2019 4:39 g 0
Sidii aan fallaanqeyntii hore waayo dib-ugu-jalleecnay oo isugu miisaanay marxaladda siyaasadeed ee musharrax Guddoomiye Gole Wakiil Abwaan Cabdirashid uu kala mid ahaa waayihii siyaasadda sannadkii 2017 iyo siyaasi Faarax Cabduqaadir ayaan maantana waxa aan ku eegaynaa dhiigbaxa uu jabka Abwaanku ku keenay ololaha Madaxweyne Gaas.
Laakiin marka hore aan yara idiin iftiimino intiina siyaasadda Fadaraalka ku garabrarata abwaanka Puntland. Abwaan Cabdirashid marna waa lataliye marna waa madaxa warfaafinta iyo wacyigelinta Madaxweyne Gaas, waxaana dadka qaar u yaqaanniin Faarax Cabduqaadirka Madaxweyne Gaas.
Haddaba muxuu Abwaanku kala mid ahaa Faarax Cabduqaadir? Siyaasi Faarax waxa uu waagii Madaxweyne Xasan Shiikh isku sharraxay Guddoomiye Kuxigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Dowladda Fadaraalka Soomaaliyeed (DFS), si lamid ah sida uu maanta Abwaan Cabdirashid isugu soo sharraxay Guddoonka Baarlamaanka Puntland. Waagaas Madaxweyne Xasan Shiikh raalli kama ahayn in Faarax Cabduqaadir oo mar ah gacantiisa midig, marna saaxiibkiis, in uu isku sharraxo jagada.
Laakiin meesha Xasan Shiikh ka talodiiday in Faarax is-sharraxo, waxaa maanta Garoowe ka muuqatay in Gaas raalli ka ahaa in saaxiibkiis Abwaan Cabdirashid uu hoggaanka Barlamaanka Puntland doorkiisa la wareego.
Nasiibwanaag ama nasiibdarro, ku xiran hadba meesha aad giraanta siyaasadda Puntland ka saarantahay, Abwaan Cabdirashid waxa uu codkiisa dhaafin waayey wareeggii koowaad iyo 5 cod, meesha Cabdixakiin Dhoobodaareed ka helay 37 cod, Cabdijamaal asna helay 15 cod. Ugu danbeyna waxa ay guushu 43 cod ku raacday Guddoomiye Dooran Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobodaareed).
Haddaba mar kale su’aasha maanta Puntland ka taagan waxa ay tahay, maxay ka dhigantahay in Abwaan Cabdirashid oo ahaa musharrixii Madaxweyne Gaas ee Guddoonka Baarlamaanka uu 66dii cod ee Baarlamaanka Puntland ka helay 5 cod oo kaliya?
Sida muuqata, falaanqeeyayaasha siyaasaadda Puntland ayana ay maanta dhegaystayaasha Radio Daljir la qaybsadeen, in kasta oo Xildhibaan hore loo doortay hoggaanka Golaha Wakiilada, haddana isbaddalka Puntland ka hanaqaaday waa mid dhab ah. Sida ay fallaanqeeyayaashu sheegeenna waa mid aan u roonaan doonin Madaxweyne Gaas.
Weli lama hubo sida xildhibaanada dooran ay ugu codeeyeen hoggaanka cusub ee Baarlamaanka, laakiin waxaa la hubaa in 49 xildhibaan cusubyihiin, 40 kamid ahna lagu tirinayo xildhibaanada isbaddal-doonka ah. 17 xildhibaan oo uu ku jiro Guddoomiyaha Dooran ,Xildhibaan Cabdixakiin Dhoobadaareed, waa xildhibaano ka soo noqday baarlamaankii hore. 17 kaas xildhibaan waxaa la qiyaasayaa in 9 kamid ahi yihiin isbaddal-doon. Sidaas darteed tirada xildhibaanada isbaddal-doonka ah waxaa lagu qiyaasi karaa 49 xildhibaan (40 kamid ah kuwo cusub iyo 9 soo laabtay).
Mar kale saadaasha Madaxweyne Gaas ma qurux badna, jidkii Abwaanku maanta ku jabeyna waa kan maanta tiim Gaas ku abuuray aabaabul horleh iyo xulufeysi aan hore u jirin.
Laakiin aaminaad ayana waa meesheeda.